महिला सम्बन्धि रोचक तथ्य, पुरुष को कुन अंग प्रति बढी आकर्षित हुन्छन महिला ?:: Mero Desh
महिला सम्बन्धि रोचक तथ्य, पुरुष को कुन अंग प्रति बढी आकर्षित हुन्छन महिला ?
Published on: २६ बैशाख २०७७, शुक्रबार ००:४६
महिलाहरु पुरुषको बिभिन्न चिज र ब्यबहार बाट आकर्षित हुने गर्दछन कोहि पुरुषको बोल्ने शैली कोहि पुरुष को व्यक्तित्व बाट आकर्षित हुने गर्दछन तर आज हामि पुरुष को कुन अंग बाट महिला हरु छिटो आकर्षित हुन्छन भन्ने कुरा को चर्चा गर्न गैरहेका छौ ।
यूनिभर्सिटी अफ ब्रिटिश कोलम्बियाले गरेको अध्ययन अनुसार, पुरुषको आँखाले महिलाहरूलाई सबैभन्दा पहिले र सबैभन्दा बढी आकर्षित गर्छ । त्यस्तै ब्रिटेन र साउथ अफ्रिकाको तीन यूनिभर्सिटीजको अध्ययनबाट पनि यो कुरा पुष्टी भएको छ ।यी अंग प्रति आकर्षित हुन्छन महिला आँखा : पुरुषहरूको आँखाले सबैभन्दा पहिले र सबैभन्दा बढी महिलाहरूलाई आकर्षित गर्छ । त्यसैले आँखालाई स्वस्थ्य राख्नु आवश्यक छ। त्यसका लागि भरपुर निन्द्राका साथ साथै स्वस्थ खानाको आवश्यक हुन्छ ।
कपाल : कुनैपनि पुरुषको कपाल कालो र चम्किलो छ भने महिलाहरु त्यस्ता पुरुष तर्फ आकर्षित हुन्छन् । ओठ र दाँत : गुलाबी ओठमा देखिने मुस्कान र टलक्क टल्कने दाँतले पनि महिलाहरुलाई सहजै आकर्षित गर्छ । छाला : सफा, स्वस्थ र चम्किलो छालाप्रति पनि महिलाहरु भुतुक्कै हुन्छन् । यस तर्फ पनि पुरुषले ध्यान दिनुपर्छ ।
जुँघा र दाह्री : बाक्लो जुँघा र दाह्री प्रति पनि महिलाहरु आकर्षित हुन्छन् । छाति र काँध : चौडा काँध र छाति, मस्कुलर शरीर, बलियो शरीरले महिलाहरूलाई चाँडो आकर्षित गर्छ ।आँखाको रङबाटै थाहा पाउन सकिन्छ मान्छेको आनीबानी
मानव शरिरको अभिन्न अंग हो आँखा । आँखा कारणले हामी संसार देख्छौं। यो सबै आँखाका नानीका कारणले सम्भव हुन्छ । मानिसहरुको आँखाको नानीको रंङ्ग फरक–फरक हुने गर्दछ । कसैको कालो , कसैको निलो, कसैको खैरो त कसैकोे पहेलो । समुद्रशास्त्रका अनुसार आँखाको रंङ्गको माध्यमद्वारा मानिसको व्यवहार र भविष्यको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ । कस्तो रङ हुँदा कस्तो बानी हुन्छ ? कालो:-त्यस्तो पुरुष वा महिला जस्को आँखा कालो हुन्छ समाजका लागि उपयोगी हुन्छन् । उनीहरुलाई जीवनमा पैसाको कमि हुदैन । खैरो:-खैरो आँखा भएका मानिसहरु अति चंचल स्वभाव र सुन्दर हुन्छन् । यस्ता मानिरहरु अति भावुक र कोमल स्वभावका हुन्छन् । यीनिहरुको बोलिमा भने नियन्त्रण हुदैन ।
निलो:-निलो आँखा भएका मानिसहरु अत्यन्तै चलाख, अवसरवादी र सानदार व्यक्तित्वको धनी हुन्छन् । यीनिहरुको जीवन सुरुमा सामान्य हुन्छ तर जीवनमा निक्कै सफलता प्राप्त गर्दछन् ।
पहेलो आँखा:-जुन व्यक्तिको आँखा घ्यू जस्तो पहेलो हुन्छन् उनीहरुको हृदय उदार हुन्छ । यीनिहरुमा ईश्वर प्रति गहिरो आश्था हुने गर्दछ । जस्लाई यीनिहरुको सहयोगको आवश्यकता पर्दछ यीनिहरु सहयोग गर्न पछि पर्दैनन् । सुन्दा अचम्म लाग्ला ! औंलाबाट थाहा हुन्छ युवतीका प्रेमी कति ?
हुन त कुन युवतीले कति प्रेमी बनाउँछन् त्यो उनिहरुको स्वभावमा भर पर्ने कुरा हो । शारीरिक बनावट र देखावटी रुपले होइन । तर, समुन्दशास्त्रमा उल्लेख गरिए अनुसार युवतीको शरीरका अंग अनुसार पनि उनीहरुको प्रेमीको अवस्था थाहा हुन्छ ।यहाँ हामीले समुन्द्र शास्त्रमा उल्लेख गरिएका स्त्रीका केही विशेषताहरु उल्लेख गरका छौं । शास्त्र अनुसार जुन युवतीका हात तथा खुट्टाको औंला लामा– लामा हुन्छन् त्यस्ता युवतीहरु धोकेबाज हुन्छन् । उनीहरुले आफ्नो प्रेमीलाई जुनसुकै बेला धोका दिन सक्छन् ।
औंला लामा हुनु स्त्रीहरुका लागि राम्रो भएपनि पुरुषहरुका लागि भने त्यस्ता युवतीको भर पर्दा धोका हुन सक्छ । त्यस्ता स्त्री निक्कै चतुर हुने र धेरै पुरुषसँग एकैपटक सम्बन्ध राख्ने समुन्द्रशास्त्रमा उल्लेख छ ।शास्त्रका अनुसार जुन स्त्रीका खुट्टामा औंला लामा र गोला हुन्छन् उनीहरु भाग्यमानी हुन्छन् । तर छोटा र टेडामेडा परेका औंलाहुनेहरु भने त्यति भाग्यमानी नहुने समुन्द्र शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ । एजेन्सी